Ikhaya / Blog / Ukuncoma okungaphezulu kwe-10,000 kuYilo lweGumbi lokuhlambela.
2020 / 10 / 23 uhleloBlog 5501 0
Ukuhombisa ikhaya elitsha yenye yezona zinto zivuyisayo onokuzenza, kwaye kulapho ungabeka khona onke amaphupha akho ngekamva elingcono. Kunokuthiwa onke amathemba ethu ngekamva afihliwe kumhombiso wekhaya lethu.
Akusoloko kulula ukufumana esona sisombululo sisiso, ngakumbi xa kufikwa kuyilo lokuhlambela.
IYurophu, iMelika, ubugqwirha, ubuncinci, ushishino, iScandinavia, isiTshayina, isiJapan, izimbo ezahlukileyo zekhaya, nganye inezinto zayo ezizodwa, okanye ezintsonkothileyo, ezihloniphekileyo okanye ezintle, i-avant-garde ipholile, okanye ilula kwaye intsha ……
Ifashoni kunye nokuSebenza- ukuLula kwaMhlanje
Uhlobo lwanamhlanje lobuncinane lolunye lweendlela eziqhelekileyo ebomini. Ukulula akuthethi ukuba lula. Isitayile esincinci sinokubonakala silula, kodwa sikwisitayile esilinganayo nesangoku.
Isitayile sangoku esincinci yindlela yoyilo eyaziwayo kuluntu lwanamhlanje lwamazwe kwaye abantu phantse bayo yonke iminyaka banokwamkela kwaye bayithande le ndlela.
Ukulula akukho lula.
Akukho mbumbulu wokuhombisa.
Ucoceko nako bubuhle.
Inala yoGcino, enamandla
Umthamo omkhulu wedraw wokumangaliswa
Epheleleyo ebudaleni-UkuKhanya kunye neSitayile esingaqhelekanga
Isitayile esingaqhelekanga, Isitayile esigxininisa kugxininiso kumgangatho ophezulu, ubunewunewu abuyonto.
Ndimele nditsho ukuba esi sitayile sihlaziyiweyo kwaye sikwinqanaba eliphezulu sithabathe amehlo abantu abaninzi abalawulwa bubuso kunye nabantu abalawulwa ngumgangatho, kwaye ilungile kwiintsapho ezilandela ubomi obuphezulu.
Ubukhazikhazi abuthethi ukuba yindumasi.
Iithoni zesinyithi ezifanelekileyo
Inika indawo yonke ipremiyamu yokuziva.
Uyilo lwesipili seFeng Shui, lubhetyebhetye kwaye lukrelekrele
Imiphezulu yeetafile emhlophe, icocekile kwaye intle
Ifashoni yomntu ngamnye-Uhlobo lweShishini
Imvakalelo yefashoni ye Uhlobo loshishino unokuba namandla kakhulu.
Icy yentsimbi, emnyama, emhlophe kunye nethoni engwevu, ezaliswe lixesha elinengqiqo nelingathintelekiyo kwimizi-mveliso. Olu hlobo loyilo lunobuntu obomeleleyo kwaye luthandwa ngamaqela amancinci.
Mnyama, mhlophe kwaye ngwevu ngokudityaniswa kobuqili
Umnyama unokuba yindawo entle.
Ukongezwa kokukhanya kunika indawo ukuziva kwetekhnoloji
Isitya esimhlophe esimhlophe esincinci esinobuntu obupheleleyo
Iklasikhi kunye nefashoni- Uhlobo lwaseTshayina olutsha
Uhlobo olutsha lwesiTshayina, ukwenzela ukuba ubuhle bemveli bemveli esempuma buphindaphindo, ngokwesiko lesiTshayina lwasekhaya nangobungangamsha besimo sobabini, ukudibanisa okudala kunye nefashoni, impumelelo yendlela entsha yaseTshayina.
Kunokuthiwa isimbo esitsha saseTshayina simanyanisa ubuhle besizukulwana sabazali kunye nesizukulwana esitsha.
Ulongamo kunye nobuhle zihlala kunye
Iindawo ezinkulu zesithuba esimhlophe
Igcina indawo isonganyelwa
Isinika indawo engakumbi yokucinga.
Uyilo olulinganayo, ubugcisa baseMpuma kakhulu
Izinto zentsimbi ngenkangeleko enkulu
Abantu bobudala obahlukeneyo, ubuntu, kunye neemfuno banokhetho olwahlukileyo kwisitayile sasekhaya. Uhlobo ngalunye lunobuntu balo kunye nengcaciso.
Uyilo olwahlukeneyo lwasekhaya lunokubonisa ubushushu obahlukeneyo. Khetha uyilo olwanelisayo kwaye wonwabe.
Ngaphambili :: Ngaba Uyayazi Ukuba Ikhohlakele Kangakanani Igumbi Langasese? Fumana uMthombo oLungileyo wokuLungisa! next: Ngubani owayenobungqina bokuhambisa ihlathi kwigumbi lokuhlambela! Kodwa ndiyathanda ~~~
Igumbi lokuhlambela eliNcinci le-2 M² lingakwazi ukwahlula emanzi kwaye eyomileyo?
Igumbi lokuhlambela ≠ Indlu yangasese… Ubunempazamo kuyo yonke le minyaka!
Okukhona Ishawa Inamandla Ngakumbi, Kona Kungcono? Iingcali zithi ……
Kutheni le nto iitephu ezilungileyo zixabisa kangaka? Sebenzisa iDatha ukukuxelela iNyaniso ...?...
Izindlu zangasese zineminyaka esi-8 ubudala, iishawari zineminyaka esi-8 ubudala, iimpompo zineminyaka emi-5 ubudala, fumana iR...
UMmiselo oMtsha waseCalifornia uValela ukwenziwa kunye noThengiso lweeMveliso zeBathroom ...